सेरोफेरो : रङसँगको प्रेम
ठाउँअनुसार फागु पूर्णिमा, होली, फागुवा, होरी जे नाम दिए पनि होली निकै प्रचलित पर्व हो। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश लिई आउने यो पर्व फागुन शुक्ल पूर्णिमामा मनाइन्छ।
- सत्ययुगमा दैत्य हिरण्यकश्यपुकी बहिनी होलिकाले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी हुन्छिन्। दाजुको आज्ञाअनुरूप विष्णुभक्त भदाहा प्रह्लादलाई मार्ने उद्देश्यले दन्किरहेको आगोमा पस्छिन् होलिका। प्रह्लादलाई आगोले कुनै असर पार्दैन तर त्यस आगोबाट होलिका स्वयं भष्म हुन्छिन्। यसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्ने होलिका भष्म भएको उपलक्ष्यमा होली खेल्ने परम्परा रहेको मानिन्छ। – द्वापर युगमा कंशले बालक कृष्ण भगवानको वध गर्न राक्षसनी पुतनालाई पठाएका हुन्छन्। कृष्णलाई आफ्नो विषाक्त स्तनपान गराउन लाग्दा भगवानको शक्तिका कारण पुतनाले आफैं प्राण त्याग गर्नुपरेको घटना हिन्दुशास्त्रमा पढ्न पाइन्छ। त्यसै मृत शरीरलाई जलाएर त्यति बेलाका गाउँलेहरूले खुसीमा फागु उत्सव मनाउन सुरु गरेको धार्मिक मान्यता छ।
हिन्दु बाहुल्य नेपाल र भारतमा मात्र नभएर अमेरिका, स्लोभाकिया, अफ्रिका, चीनलगायत विश्वका अन्य देशमा पनि रङको पर्व मनाउने गरिन्छ। म्यानमारमा टिगुला, फ्रान्समा गाचो, चीनमा च्वेज, अफ्रिकामा बोया, अमेरिकामा होवो, स्लोभाकियामा बेलियाकोनेन्से, जर्मनीमा कार्निवाल, पोल्यान्डमा असिना, जापानमा दे मोन्जी ओकुरिबी, इटलीमा रेडिका पर्वका नामले रङ खेलिन्छ। यो परम्पराले रङसँगको मानव प्रेम प्रस्तुत गर्ने विश्वास गरिन्छ।
द्वापर युगमा राधाकृष्णले खेलेको होली सम्झाउन मथुरा वृन्दावनमा खेलिने होलीमा महिला र पुरूषबीच लाठी नाच गर्ने परम्परा छ।
कामको सिलसिलामा साउदी अरब, कतार, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कोरिया, हङकङ पुगेका नेपालीमाझ पनि होली विशेष रूपले मनाइन्छ। त्यस्तै नेपालमा रहने विदेशी पनि यो पर्वमा उत्तिकै रमाउने गर्छन्।
२००७ सालअघि नारायणहिटी राजदरबार र सिंहदरबारमा देशका उच्चपदस्थ कर्मचारी, सैनिक, राज खानदानका उच्च व्यक्ति तथा राजपरिवारसँगै तिनका नातेदारबीच होली जम्ने गर्थ्यो। यसका लागि दरबारबाट उर्दी नै जारी हुन्थ्यो।
यसै अवसरमा जनकपुरमा औंसीको दिनबाटै १५ दिने मिथिला परिक्रमा यात्रा सुरु हुने र फागु पूर्णिमामा जनकपुरमै आएर सम्पन्न हुने गर्छ।
सञ्चार माध्यमको विकासले पछिल्लो समय होलीलाई टोलटोलमा पुर्‍याएको छ। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट आदिमा होलीको झल्को दिने गीतसंगीत, लेखरचना, फोटो, चलचित्र आदि प्रसारित तथा प्रकाशित हुने गर्छन्। यसैबेला सहरी क्षेत्रमा आयोजना हुने सांगीतिक कार्यक्रम, डान्स पार्टीजस्ता जमघटले होलीको गर्मी झन् बढाउने गर्छ।
होलीमा आयात गरिएका पिचकारी, लोला, रासायनिक पदार्थ तथा हानिकारक तत्व मिश्रित विभिन्न रङका नाममा देशको ठूलो रकम विदेशिएको छ। यस्ता सामग्री विशेषतः छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनबाट बढी मात्रामा आयात हुने व्यापारीहरू बताउँछन्।
संस्कृति आफैंमा नराम्रो हैन। यसलाई मनाउने गलत तरिकाले मान्छेमा संस्कृतिप्रति वितृष्णा जगाएको छ। एकआपसमा चिनजान हुने, सम्बन्ध विस्तार हुने यो अवसरलाई सकारात्मक रूपले उपयोग गरौँ। सबैलाई होलीको शुभकामना!
यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया
कार्टुन राम्रो लाग्यो।
ramhari thapa ramhari_thapa@yahoo.com
― गङ्गाराम गड्तौला
रमाइलो त गर्नैपर्छ एकबारको चोला
बाटो हिँड्ने बटुवालाई नहान है लोला।
आफू―आफैँ खेल्नुपर्छ खेल्ने भए होली
राम्रा–राम्रा तरुनीका नभिजाऊ चोली।
अर्कालाई रुवाएर आफू हाँस्नु हुन्न
तिमीलाई त्यसो गरे तिम्रो मन रुन्न?
विकृति र विसङ्गति कति चाँडो सिक्या
हेर–हेर खल्तीबाट किन बेलुन झिक्या?
कहाँ जाने, कति काम गर्नुपर्ने होला
रुँदै छ कि मनभित्र कति पीर होला।
बाटो छेकी युवतीका मुख किन ताक्या
के गरेको तिमीलाई छैन लाज लाग्या?
बेसोमत, नकचरो, अलच्छिनी मोरो
आफ्नै दिदीबहिनीलाई हिर्काउनु नि बरु।
भन्न थालिन् मुख छोपेर रुँदै धुरुधुरु
के बोलेकी होली मैयाँ जाऊ न खुरुखुरु
महिला र केटीहरू बाहिरै ननिस्कनू
अपरिचितसँग कोही पनि नजिस्कनू।
होली खेल्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ है
अर्काको स्वतन्त्रता हनन नगर है ।
Ganga Ram Gadtoula n.gadtoula@yahoo.com
मोबाइलको साटो पुस्तक
बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएर लेख्नु आफैमा जटिल र चुनौती पुर्ण छ । त्यसैमाथि सबै भन्दा सरल बनाउँनु पर्ने विषय पनि यहि रहेछ । बाल मस्तिस्कको...
साँघुरो , अँध्यारो र असरल्ल कोठा। खाटछेउमा केहि पुराना भाँडाकुँडा मिल्कीएका। खाटमाथि पोको परेको सिरक। त्यही खाटका वरपरनै उनका संसार घु...
देउराली उकालो चढेर
'आधा घण्टा सम्म धान्छ त्यसपछि हावा फुस्कदै जान सक्छ अल्लि बिचार गर्नु होला', प्लाष्टिकको डुङ्गा देखाउँदै एक सैनिकको कुरा सुनेपछि मन...
मन लोभ्याउँने ल्वाङ्ग
—भवसागर घिमिरे ‘हामी जिन्दगीबाट भाग्नको लागि यात्रा गर्दैनौं, बरु जिन्दगीकोलागि नै गछौं ताकी यसले हामीलाई छाडेर नभागोस् ।’ यस्तै प्रचलि...
Blog Archive June 2018 (3) May 2018 (1) February 2018 (4) December 2017 (4) October 2017 (1) September 2017 (3) June 2017 (1) April 2017 (1) December 2016 (1) November 2016 (2) October 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (1) June 2016 (1) May 2016 (3) April 2016 (1) March 2016 (3) February 2016 (1) December 2015 (6) November 2015 (5) October 2015 (1) September 2015 (4) August 2015 (1) July 2015 (1) June 2015 (2) April 2015 (1) March 2015 (2) February 2015 (1) August 2014 (2) June 2014 (3) February 2014 (1) January 2014 (2) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (4) August 2013 (1) July 2013 (6) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (7) January 2013 (2) August 2012 (1) May 2012 (3) December 2011 (3) November 2011 (2) September 2011 (1) July 2011 (6) June 2011 (2) May 2011 (4) April 2011 (2) March 2011 (7) February 2011 (9) January 2011 (13) December 2010 (2) August 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) October 2009 (1) September 2009 (6) August 2009 (1) July 2009 (6) April 2009 (5) March 2009 (35)